musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Laos capital inogamuchira China Tourism uye Tsika Svondo
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Laos Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
China Yekushanya uye Tsika Svondo, chimwe chezviitiko zvakakosha zveKushanya Laos-China Gore 2019, yakavhurwa muguta reLao Vientiane neChishanu.
Panguva yechiitiko ichi, chichagara kusvika Svondo, nyanzvi dzekushanya kubva kuChina Dunhu reSichuan dzichaita hurukuro nezve kusimudzira indasitiri netsika dzekushanya.
Vatambi vanobva kuSichuan vari kuunza kutamba kwazvino, Sichuan Opera kumeso kuchinjika, mhemberero refu yespout teapot uye kumwe kuita kwounyanzvi nazvino kuravira uye zvechinyakare zveSichuan maitiro kune vateereri veLao.
Chiitiko ichi chichavawo nezviitiko zvakasiyana zvetsika, mapurojekiti ekudyidzana, kuratidzwa kwemufananidzo wakanzi "Yakanaka China" pamwe nekuratidzwa kwenzvimbo yeSichuan.
Pamhemberero yekuvhura, iyo Sichuan Yemazuva Yekutamba Troupe yakaronga mutambo wemazuva ano wekutamba Gen (Mudzi), iyo yakafemerwa neSanxingdui Ruins, inofungidzirwa kunge zvisaririra zveShu Kingdom zvakanyangarika pasi pemamiriro asinganzwisisike makore zviuru zvitatu zvakapfuura, zvichipa vateereri mukana chiitiko chitsva.
NeMugovera neSvondo, mukati mevhiki reInternational Day reZuva reVana, chiitiko ichi chinopa vana zviitiko zvakaita sedhirivhari yemazuva ano, Sichuan Opera Face Changing uye mutambo wakareba wespout teapot, Face Painting, Motion Sensing Games, 3D mifananidzo yemadziro uye panda zvipfeko zvekudyidzana.
Iyo Yekushanya uye Tsika Svondo yakabatanidzwa pamwe chete neChinese Culture Center muLaos uye neSichuan Provincial department rezveTsika neKushanya.
Mhemberero yekugadzwa kweChishanu yakapindwa nemumiriri weChinese kuLaos Jiang Zaidong, Gurukota rezveRuzivo, Tsika neHurumende Bosengkham Vongdara, pamwe nevanhu vanopfuura mazana matatu vanobva kwakasiyana hupenyu muLaos.